युट्युबमा तहल्का पिट्दै ‘किल दिस लभ’, कसरी तोड्यो ग्लोबल रेकर्ड ?| Nepal Pati
युट्युबमा तहल्का पिट्दै ‘किल दिस लभ’, कसरी तोड्यो ग्लोबल रेकर्ड ?
आज पनि रेडियो बज्छ । लोकभाका घन्कीछन् । विभिन्न लय, भाका र स्वरका गितसंगीत हामी सुनिरहन्छौ । कोहि एक खाले संगीत सुन्लान, कोहि अर्कै खाले । तर संगीत मन नपराउने सायदै कोही होलान् । बिरामीहरु आफ्नो गीतसंगीत औषधी भएको बताउँछन् । जागिरेहरु, व्यवसायीहरु संगीतले मानसिक तनाव कम गराउने बताउँछन् ।विद्यार्थी, अभिभावक, ड्राइभर, कलाकार सबैलाई गितसंगीतप्रति अगाध प्रेम हुनेगर्छ । समग्रमा आम मानब जीवनका लगि सुख दु:खको साथी हो – संगीत ।
हामी एउटा भूगोलमा रहेर पनि अर्को भूगोल, अर्को भाषाको गितसंगीतमा झुमिरहेका हुन्छौ । भनिन्छ पनि गितसंगीतको कुनै भाषा हुँदैन । यो भनाईलाई पुष्टि गरिदियो केही बर्षअघि भइरल भएको गीत ‘ग्यङनम स्टाइल’ले । दक्षिण कोरियाई पप स्टारले गाएको यो गीतले के भन्छ ? सायद धेरैले बुझेनन् । तर, गीत सुन्न र हेर्न भने सबै लालयित भए । त्यही कारण त पप स्टार ‘साई’ले गाएको यो गीतले विश्व पिट्यो । युट्युबमा सर्वाधिक बढी हेरिने भिडियोमा यसले नम्बर वान रेकर्ड बनायो ।
अहिले पनि यस्तै अर्को गीत आएको छ । उक्त गीत दक्षिण कोरियाई पप ब्यान्डको हो । ब्यान्डको नाम हो, ब्ल्याकपिंक । यस ब्यान्डको एउटा गीत ‘किल दिस लभ’ ले अहिले युट्युबमा तहल्का पिटेको छ ।
यो गीत कति तिब्र रफ्तारमा हिट भयो भने युट्युबमा अपलोड भएको दुई दिनमा ग्यङनाम स्टाइलको रेकर्ड तोड्यो । यो गीतको भिडियो २४ घण्टामा ५६ दशमलव ५६.७ मिलियन पटक हेरियो, युट्युबमा । हाल यो गितको भ्यु १३२ मिलियन पुगेको छ ।
यस गीतले एक दिनम सबैभन्दा बढी पटक हेरिएको अरियना ग्रान्देको ‘थ्यांकयु’ गीतको रेकर्ड पनि तोडिदियो ।
सन् २०१६ मा स्थापित भएको ब्यान्ड हो, ब्याल्याकपिंक । यो ब्यान्डका सम्पूर्ण सदस्य युवतीहरु छन् । यसमा जीसू, जेनी, रोज र लिसा सम्मिलित छन् । यस ब्यान्डले सेप्टेम्बर २०१६ मा स्क्वायर वन नामको आफ्नो पहिलो एल्बम जारी गरेको थियो । यो एल्बम कोरियामा एकदमै रुचाइएको थियो ।
सन् २०१८ मा यस ब्यान्डले ‘डु डु डु डु’ गीत सार्वजनिक गरेको थियो, जो दक्षिण कोरियामा युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको थियो ।